Aragtiwanaagsan.com – Maahmaahyo-cusub!!/ Kuwii sanadkan cusub..2019!!
Jan 31, 2019 cabdicasiis mohamed Dhacdooyin, Wararka, Waxbarasho 0
Waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa inta jecel wax akhriska iyo qoraalka …iyo suugaanta, Maahmaahyadu waxa y la sameysmaan waayaha iyo ayaamaha..iyo dhacdooyinka..kolba lagu jiro ama soo kordha. Waxaan anigu aaminsanahay in aanay murtida iyo suugaantu ku xidhneyn xilli qudha.
Lacag ama liin ku cab ama ku laafyoo.
Malab waa la muudsadaa.
Qorane,qaraxyadii waa ka badbaaday.
Lacagi qaylo weyneey, qiimo u yeeli lahayd.
Xaasid lagama waayo,xagxagasho hoose.
Meher iyo mushxaradi waxay kuu hogaamiyaan aroos.
Qolqol- joog nolol sameeyey…qurba-joog baa la yaaba.
Boolis xadhig ma daayo,tabashona xantoxanteyn ma deyso.
Lacag waa la jalleecaa.
Hadraawi baa jacayl dhagax dhigay.
Han baa lagu noqdaa,hogaamiye ama lagu helaa hanti.
Hibo, hooyadaa baa kugu dhasha.
Nin ballaadhani,waxa uu u qalmaa,qaabilaad ballaadhan.
Hunguri weyni waxa dhaanta,han weyni.
Gobi,guri kaama saarto.
Gobi,gorof caano ah,ayey ku dhansiisaa,gunina,guntigay kaala baxdaa.
Doorasho nin ku guuleystay,kalsoonibuu kursiga ugu fadhiistaa.
Dhaliili ceebtay dhaydaa.
Nin aan bilis lahayni,biil kama warwaro.
Suldaan socodkiisa laga gartaa.
Raganimadaada nin aan ogoleyn,rati laga ma qaato.
Nin aad u xanaaqsantahay,xil ka qaadistiisu,xiisay kuu sameysaa.
Janada xaasid ma joogee,Xural-cayn baa joogta.
Xilna waxaan u nacay,xilku waa meerto.
Baahiyi way ku bahdishaa.
Xaasid xumaan buu u tafoxaytay.
Xil marka la hayana,muxaafid baa la yahay,marka laga tagana mucaarid baa la yahay.
Naag qurux badani,way u qalantaa kharash kasta.!!
Taajir aan nolol fiican ku nooleyn,Faqiir faraxsan baa dhaama.
Madaxweyne aad la soo halgantay,haddii uu ku magacaabi waayo,ha muraaro-dilaacin!
Seddex waa wax lala yaabo:
1-Nin madaxweyne soo noqday,oo hadana raadinaaya.
2-Nin Maayar ah,oo magaaladiisii dayacantahay.
3-Nin maal haystoo,walaalkii macaluulaayo.
Dadku waa seddex:
1-Qof ,qof wax ku ah.
2-Qof kaligii wax ah.
3- iyo Qof aan waxba ahayn.
Curiye:C.casiis Maxamed Yoonis(ansaari).
Macalin dhiga luuqadaha/Aqoonyahan College for English!
Laanta Af-ka carabiga ee BBCda, oo Wareysi la yeelatay..Dhakhtar rug cadda ah oo reer Masar ah oo beera Wadnaha iyo Kalyahay!! Kooras online ah,oo ingiriisiya ayuu kuu bilaabayaa Machadka Aqoonyahan College ee ku yaalla magaalada Hargeysa!!